चिनियाँ राष्ट्रपति सीको कृषिमोह, नेपाली नेताहरूका लागि पाठ- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
नेपालमा नेता र नीति निर्माताहरूले मुखले होइन, मनले जप्नुपर्ने अबको मन्त्र यस्तो रहोस् - ‘यदि नेपाल बलियो हुन चाहन्छ भने कृषि बलियो हुनुपर्छ; यदि नेपाल सुन्दर हुन चाहन्छ भने ग्रामीण क्षेत्र सुन्दर हुनुपर्छ; यदि नेपाल धनी हुन चाहन्छ भने किसान धनी हुनुपर्छ।’
कार्तिक ४, २०७८ लक्ष्मी लम्साल
‘यदि चीन बलियो हुन चाहन्छ भने कृषि बलियो हुनुपर्छ; यदि चीन सुन्दर हुन चाहन्छ भने ग्रामीण क्षेत्र सुन्दर हुनुपर्छ; यदि चीन धनी हुन चाहन्छ भने किसान धनी हुनुपर्छ,’ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले देशको गौरवमा किसानलाई यसरी जोडेका छन्।
ग्रामीण मुद्दाहरुलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्नु, नयाँ परिस्थितिमा ग्रामीण सुधारको प्रवर्द्धन गर्नु, ग्रामीण समन्वयलाई सुदृढ पार्नु, किसानहरुलाई बलियो र लाभान्वित तुल्याउनुजस्ता चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नीतिले आज सिंगो चीन गरिबीमुक्त भएको छ जसको सिको गर्न विश्वका विकासोन्मुख मुलुकहरू लालायित छन्।
बर्सेनि कुनै न कुनै साना ठूला कृषि गतिविधिमा सक्रिय भइरहने चीनका राष्ट्रपति सीले किसानको हौसला बढाइरहेजस्तै अहिले भर्खरै नेपाली नेताबाट पनि किसानहरूले उस्तै अपेक्षा गरिरहेका छन्। अप्रत्यासित बाढी वर्षाका कारण भित्र्याउन ठिक्क पारिएको फसल डुबानमा परेर टुसाउन थालेको छ। ‘म सत्ता हूँ, म सत्ताघटक हूँ, म पार्टीको सुप्रिमो हूँ, मद्वारा परिचालित हनुमान नै कृषिमन्त्री हो। किसानका जे जस्ता समस्याहरू छन्, ती पूरा गरिदिन सरकारसँग माग गर्दछु।’ यस्तो आशयका गोहीको आँशुजस्तो रोदन नक्कली भएको भनेर किसानले त बुझिसकेको हुनुपर्छ। तर विकल्पविहीन किसानले यिनै नेताबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर छ।
सामान्यतया नेपालको कृषि क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने कुरासँग कुनै नेता अपरिचित छैन होला। कुनै माथिल्लो पदमा पुग्नेबित्तिकै ‘किसानको छोरो’ भन्ने विशेषणका साथ वाहवाही गरिन्छ। अहिले पनि सत्तामा रहिरहेका र राजनीतिको वरिपरि चक्कर लगाइरहेका हेरकजसो वरिष्ठ नेताहरू कृषि पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। जब उनीहरू सुकिला मुकिला भए तब किसान, कृषि क्षेत्रका समस्यामा आँखा चिम्लिन सक्षम भएका मात्रै हुन्।
बर्सेनि उखु किसान आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएर सिंहदरबारलाई गुहार्छन्। समयमा मल, बीउबिजन, सिंचाइ कुलो नपाएर किसानहरू पुर्पुरोमा हात लगाइरहन्छन्, तर कस्तै समाजवादी नेताहरू यस्ता समस्यामा एक मिनेट नस सायदै खर्चिन्छन्। बरू मजाकका लागि सारा राजनीतिक जीवन बिताइरहेको देखिन्छ। नेपालका नेताहरूमा ‘कृषिको सम्मान गरेमा सानो भइन्छ’ भने हीनताबोध देखिन्छ। किसानकै नामबाट पार्टी खोल्नेहरू पनि नयाँ पुस्तालाई ‘धान कताबाट आउँछ? भन्ने पाठ सिकाउन असमर्थ देखिन्छन्।
‘कहिल्यै पनि कृषिलाई वेवास्ता गर्नुहुँदैन, किसानलाई बिर्सनुहुँदैन, ग्रामीण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन’ भनेर हाल चीनका लागि सबैभन्दा सर्वोच्च नेता सी चिनफिङ भनिरहन्छन्। उनले मुलुक शक्तिशाली, सुन्दर र धनी बन्नका लागि कृषि, गाउँ र किसान धनी र बलियो हुनुपर्ने वकालत गरिरहन्छन्। युवावस्थामा काँधमा कोदालो बोकेर श्रमिक पृष्ठभूमि तयार पारेका सी चिनफिङले कृषिको सम्मान गरिरहँदा संसारले कहीँ कुनै कोणबाट आलोचना गरेको त सुनिँदैन। बरू उनको गाउँ गाउँ चहार्ने बानीले चीनको कृषि क्षेत्र जागरुक र उत्साहित बन्दै गएको छ। गत वर्ष सन् २०२० मा चीनको शरदऋतुको बालीरोपण क्षेत्रफल १ अर्ब २९ करोड मू. (चिनियाँमा) अर्थात् ८६ लाख हेक्टरभन्दा बढी रह्यो।
यस वर्ष सन् २०२१मा अन्नबालीको वार्षिक उत्पादन ६ खर्ब ५० अर्ब किलोग्राम पुग्ने अनुमान छ। चीनको कृषि क्षेत्र झन् झन् बढी यान्त्रिक उपकरणले सजिएको छ। कृषिको आधुनिकीकरणको बाटोबाट चिनियाँ ग्रामीण क्षेत्रको पुनरुत्थान भइरहेको छ। यस वर्षकै वसन्त ऋतुको खेतीपातीमा ३० हजार भन्दा बढी मानवरहित विमान प्रयोग गरिएका छन्। गत वर्षको अन्तिममा गरिबी निवारणको युद्ध कृषिकै कारण सफल भएको हो। ९ करोड ८९ लाख ९० हजार नागरिक गरिबीबाट मुक्त हुनुमा कृषिकै दाहिने हात छ। सन् २०२० मा ‘एक गाउँ, एक दृश्य’ भन्ने चिनियाँ अभियानबाट १२ सय १६ वटा सुन्दर गाउँ सुधार गरिएका छन्। कामको खोजीमा जन्मथलो छोड्ने किसानहरू फर्किएका छन्, जुन संख्या १ करोड १ लाखभन्दा बढी थियो।
चीनले ग्रामीण क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि परम्परागत कृषि प्रणाली परित्याग गर्न पहल गरेको छ। त्यसको अगुवाई सत्ता संचालक कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको छ। जसमा देखिने खालको उपलब्धि प्राप्त भएको छ। कुनै पनि मुलुकको शासकीय प्रणाली भनेको सो मुलुकको बाँच्ने आधारशीला खाद्यान्नको समस्या टार्नु हो र कुनै पनि असल राजनीतिक पार्टीको क्षमता किसानसँग माटोमा खेल्नुमा दर्शिन्छ। कृषि के हो र विकासको लक्ष्य के हो भन्ने नारा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नाले मात्रै हुन्न। कृषि र गाउँप्रति आकर्षण नबढाएसम्म नेपालको समृद्धिको बाटो पहिल्याउन अझै कठिन छ।
देशमा भूकम्प, कोरोना महामारीपछि बाढीवर्षाले दरिद्रताको अर्को बज्र परेको छ जुन कुनै नै कुनै स्वरूपमा सारा नेपालीको टाउकोमा बज्रिनेछ। मौसम पूर्वानुमानमा लापर्वाही गर्ने निकायले आफूलाई सच्याउन कति वर्ष लगाउँछ, यकिन छैन। उठिवास भएका किसानको आँशु पुछ्ने अभिभावक को बन्छ, खोजेर भेटिँदैन। नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भनेर पाठ्यपुस्तकमा अझै कति वर्षसम्म लेखिन्छ, स्पष्ट छैन। व्यवहारमा सबैभन्दा प्रताडित क्षेत्रमध्ये कृषि नै भएको कहिलेसम्म स्वीकार्नुपर्ने हो, पत्तो छैन। मालदार मन्त्रालयको सूचिमा कृषि मन्त्रालय कहिले पर्ने हो, भन्न सकिन्न।
विज्ञान प्रविधिको यति तीव्र विकासमा पनि नेपालको कृषि क्षेत्र पछौटे हुनुमा नेता र नीति निर्माताहरूमा ‘ग्ल्यामर’ को दृष्टिदोष हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। नेपालका लोकप्रिय नेताहरू वा कलाकार ‘सेलिब्रिटी’हरू कृषि क्षेत्रको प्रचारका लागि समय खर्चिन सक्दैनन्। असार/साउनमा किसानले रोप्न ठिक्क पारेका हिलोखेतमा लडीबुडी खेल्ने बाहेक उनीहरूको योगदानले एउटा गेडो उम्रिएको देखिँदैन। हो, अचेल सी चिनफिङले खेतबारीमा डल्ला फुटाएको देखिन्न तर पनि उनको अभिभावकीय सान्त्वनाले चिनियाँ किसानहरू धमाधम कृषिबाट आफ्नो र देशको कायापलट गरिरहेका छन्। नेपालमा जनताको सुखदुःखका पहरेदार ठानिने अनगिन्ती नेताहरू छन्। यिनीहरूले चाहने हो भने हप्तादिनमै सत्ता ढाल्ने ल्याकत राख्छन्। त्यसैले शक्तिशाली स्वनामधन्य नेताहरू आफैँ हिलोमैलोमा नहोमिएलान् तर कृषि र किसानको उत्थानका लागि सानोतिनो वकालत गरिदिए मात्रै पनि ठूलो ढाडस मिल्नेछ, अहिलेका लागि।
प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ १३:३१
'बेस क्याम्पको कष्टकर रात, तीनदिने हिँडाइको थकान निलो तिलिचो तालले एकैछिनमा बिर्साइदियो । कुनै ठूलै सफलता प्राप्त गरेझैं हामीले खुसीले चिच्यायौँ ।'
दसैंको मुखमा गाडी भन्नेबित्तिकै नपाइने । पाइए पनि लिइरहेको भाडामा बेसींसहर लैजान चालक नमान्ने । २ घण्टाको पर्खाईपछि ६ बजे बल्ल डिलक्स भेट्यौं । बेसींसहरमा -पहिलो रात । दोस्रो दिन - चामे हुँदै गाडीबाटै खाङ्गसार पुग्ने । तेस्रो दिन –खाङ्गसारबाट ट्रेक गर्दै बेस क्याम्प पुग्ने अनि आराम गर्ने । भोलिपल्ट तिलिचो पुग्ने अनि बेस क्याम्पमै फर्किने योजना बनेको थियो । फूलपातीको दिन बेसींसहर पुग्दा तिलिचो पुग्ने हाम्रो रुट बदलियो ।
बाटो बिग्रिएकाले गाडी खाङ्गसारसम्म नपुग्ने खबर पाइसकेका थियौं । त्यसैले हामीले गाडी चढ्ने समय छोट्याएर हिँड्ने समय लम्ब्याउने भनेर बेसींसहर पुगेकै दिन चामेको गाडी समात्यौं । हिँडाइ लम्बिए आराम गर्दै कदम चाल्न पाइन्थ्यो भन्ने लोभ थियो । बेसींसहरबाट दिउँसोको ३ बजे गाडी चामे लाग्यो । बेसींसहर पुग्दा गर्मी थियो । चामेको उकालो चढेसँगै चिसो हावाले स्वागत गर्न थाल्यो । बेसींसहरलाई पछाडि छोड्दै उकालो लागिरहेको गाडीको झ्यालबाट हाम्रो आँखा हटेन । रुख, पहाड, बाटा छेउछाउका घरहरु नियाल्न पाउँदा थकान मेटिँदै गयो ।
खाल्डाखुल्डी बाटोसँगै मर्स्याङ्दी नदी पनि बगिरहेको थियो । गाडीमा पनि मर्स्याङ्दीमा हेलिएला भन्ने डरले आङ सिरिङ्ग हुन्थ्यो। पहिरोले बिगारेको बाटो गाडीले छिचोल्न नसकेर हामी २ पटक ओर्लिनु परेको थियो । गन्तव्य एउटै भएपछि साथीहरु बाटोमै भेटिँदा रहेछन् । हाम्रो टोलीसँग गाडीका अरु यात्रु पनि मिसिन आइपुगे । नयाँ सहयात्रीहरुसँग गफिँदा अफरोडको यात्रा झन सहज बन्यो । गाडीले रातको १० बजे चामेको होटलमा छोडिदियो । १५ घण्टाको यात्राले बल्ल आराम पायो ।
चामेबाट बिहानको ६:३० मा हामीले ट्रेकिङ सुरु गर्‍यौँ । होटलमा भेटिएका तिब्बती र अन्य विदेशी साथीहरु पनि हामीसँगै हिँड्ने भए । ढुकुर पोखरीमा खाना खाने गरी कदम बढायौं । फलामको लौरोको साहारामा कहिले उकालो कहिले ओरालो, भिरको तेर्सो बाटो, खोला किनारको बाटो नाप्न थाल्यौं । सिरेटो झन चिसिएको थियो । ज्याकेटले पनि नछेक्ला भन्ने डर भयो । जतिजति अगाडि बढ्दै गयौं मर्स्याङ्दी झनै सुसाइरहेको थियो । कतै सल्लाका जंगल कतै ढुंगैमात्र देखिने पहाड ।
सबैको गति समान थिएन । हिँड्दै गर्दा काठमाडौंबाट सँगै निस्किएका हाम्रो टोली फरक-फरक समूहरुमा बाँडिन पुग्यौं । करिब ८ घण्टा हिँडिसकेपछि हामी ढुकुर पोखरी आइपुग्यौं । यहाँ आइपुग्दासम्म साथी निशाको लगातारको हिँडाइले गोडाको औंलामा चोट बनिसकेछ । सहरमा एउटा चोकबाट अर्को चोक पुग्न पठाओ चढ्ने हाम्रो बानीले के हिँड्न सकोस् त !
खाना खाएर फेरि मनाङतर्फ यात्रा सोझियो । गोडाहरु हिँड्न तयार छैनन् तर मनाङ त जसरी नै पुग्नै पर्‍यो । जसोतसो हिँड्न तम्सियौं । आखिर यात्रामा निस्किएपछि नहिँडेर सुख ? यही बुझेर हुनुपर्छ निशा चोट सहँदै अगाडि बढिरहिन् । गोडा दुखेका थिए, तैपनि बाटो छोटिँदै थियो । ४ घण्टा हिँडिसकेपछि हामी लोअर पिसाङ पुग्यौं । यहाँबाट हाम्रा गोडा मात्र होइन, अगाडि बढ्ने रहर पनि रोकिएझैं भयो । मनाङमा होटल चलाइरहेका नेपाली फिल्मका निर्माता विनोद गुरुङलाई हारगुहार गरेर गाडी मगायौं । गाडीले डेढ घण्टामै मनाङ पुर्‍यायो । यहाँआएसँगै हिमाल नजिकिन थाल्यो। याकका घाँटीमा झुन्डिएको घन्टीको आवाज, ढुंगाका घरहरु, सुख्खा पहाडहरुले मनाङलाई सानदार बनाएझैं लाग्थ्यो । मनाङको यही सौन्दर्यले मोहित बनाइरह्यो ।
मनाङमा रात बिताएको भोलिपल्ट हामीले ट्रेकिङलाई निरन्तरता दिने सोचिसक्यौं । श्रीखर्कमा खाना खाएर बेस क्याम्प पुग्ने योजना बन्यो । नवमीको दिन हामीले मनाङबाट श्रीखर्कतर्फको बाटो उक्लिन सुरु गरिसक्यौं । फराकिलो बाटोमा त गोडा सजिलै चल्छ । तर ठाडो उकालोमा सास फुलेर आउँछ । लामो-लामो सास फेर्ने प्रयास जारी राख्दै गोडालाई चलाइरह्यौं ।
हरियो जंगल देखिन छाडिसकेको थियो । सुख्खा मरुभूमिमा हिँडिरहेझैं भानले मन फुरुङ्ग थियो । घरहरु देख्न छाडेका थिए । सुख्खा पहाड अनि स-साना बुट्यानको अर्कै दुनियाँमा आइपुगेको अनुभव गरिरह्यौँ । ४ घण्टापछि श्रीखर्कमा पुगेर भारी बिसायौं । यात्रामा हामी ७ साथी कहिल्यै सँगै भएनौं । आ-आफ्ना गति मिल्ने अन्य यात्रीसँग मिसिँदै हिँड्ने बानी बनिसकेको थियो । श्रीखर्क पुगेर थाहा पायौं, हामीभन्दा अघिअघि हिँडिसकेको नमराज त्यहाँ थिएन । श्रीखर्कमा खाना खाने योजना बनाएर मनाङबाट हिँडेको साथीलाई होटलमा नदेख्दा मन आत्तियो । नमराजलाई फोन सम्पर्क गर्न थाल्यौं । मोबाइलमा टावर देखाउँदैन । अगाडि खोज्न जाने आँट कसैलाई थिएन । सबै लखतरान परेका । सबैजनाको मनमा एउटै प्रश्न थियो- नमराज कहाँ गयो ? । बाटोले तिलिचो मात्र पुर्‍याउँथेन । याकखर्क, थोराङ्ला पास हुँदै मुक्तिनाथसम्ममै पुग्न पनि सकिन्थ्यो । कतै त्यही बाटोलाई नमराजले रोज्यो कि ? मन अत्तालिन थाल्यो । नमराज हरायो भन्नेमा समूहमा एकमत बन्यो ।
खाना खाने बेला भइसक्यो । नमराज न छोडिआएको बाटोमा देखिन्छ न अगाडिको उकालोतिर । सँगै तिलिचो पुग्ने वाचाका साथ आएको साथी हराएपछि चिन्ता थपियो । नमराजलाई पर्खनुको विकल्प थिएन । खोज्ने शक्ति शरीरमा छैन । हामीले नमराजको बाटो हेरिरह्यौँ। करिब आधा घण्टापछि नमराज थकित मुद्रामा होटलमा देखियो । बल्ल मन शान्त भयो । 'एकजना साथी अगाडि पुगेजस्तो लागेर हिँडेको । धेरै अगाडि पुगेछु । बेस क्याम्पबाट फर्कनेहरुले अगाडिको यात्रामा कुनै समूह नभेटिएको कुरा गरिसकेपछि म फर्कें । अनकन्टार पहाडमा आफू हराएझैं लाग्दा रुन पनि मन लाग्यो । तर म फर्केर आएँ,' नमराजले समूहबाट छुट्टिँदाको पीडा पोख्यो । नमराजको घट्नाले साथीहरुलाई समूह छोडेर एक्लिँन दिएन । योजनाअनुरुप हामीले ब्यागलाई श्रीखर्कमा राखेर तिलिचो चढ्न चाहिने सामग्री बोकेर उकालो चढ्न थाल्यौं ।
अब सुरु भयो ठाडो उकालो । ब्यागबिनाको शरीर हलुको त अनुभव हुन्थ्यो तर ठाडो उकालोमा सास फुलेर कदम रोकिन्थ्यो । उकालो सजिलै चढ्न सक्नेहरुले छोडेर अगाडि बढ्थे । फुलेको साससँग गोडाको तालमेल मिलाउन नसक्नेहरु घिस्रिँदै अगाडि बढिरह्यौं । उकालोमा दम फुल्दा थच्चक्क बस्न खोज्थ्यो शरीर । तर सँगै यात्रा गर्नेहरु थचक्क बस्ने शरीरले आराम खोज्ने बताउँदै हिँडिरहन हौसला दिइरहन्थ्यो । उकालोमा 'अब सक्दिनँ अगाडि बढ्न' भनेर गोडाले साथ छोड्दा रोनिस भाइले सहयोगको हात अगाडि बढाउँथ्यो । गोडाले साथ छोडे पनि सहयात्रीहरुको हात पाउँदा हिँड्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्तिले गोडालाई घोडालाई झैं दौडिन निर्देशन दिन्थ्यो ।
ट्रेकिङ कहाँ सजिलो हुँदो रहेछ र ? ४९१९ मिटरको उचाइमा अवस्थित तिलिचो पुग्न झन् कहाँ सजिलो ? तर यात्रामा भेटिने तीनै उकालोहरुलाई भन्दै हिँड्यौं, ‌उकालोपछि ओराली आइहाल्छ नि ! हाँसिरहेको हिमालले गन्तव्यनजिक छ भन्ने संकेत दिइरह्यो । गन्तव्यबाट फर्किरहने साथीहरुसँग गन्तव्यको दूरी सोध्दै अगाडि बढ्नुको छुट्टै मजा हुन्थ्ये । बाटोका स-साना पहिरोले २ पाइला अट्ने बाटो छोपिदिन्थ्यो । पहिरो खसिरहन्थ्यो, हामी बाटो बनाउँदै अगाडि बढ्थ्यौँ । ५ घण्टाको साहसिक यात्राले साँझको ६ बजेतिर बेस क्याम्प पुर्‍यायो ।
बेस क्याम्प पुगेपछि साथी दीपेन्द्रको शरीर थरथराउन थाल्यो । उनी बिसन्चो भएपछि समूहले असुरक्षित अनुभव गर्न थालिसकेको थियो । केही साथीलाई बेस क्याम्प नपुग्दै वान्ता भइसकेको थियो । खाना देख्नेबित्तिकै वाकवाकी लागेपछि भने लाग्यो, अबको यात्रा झनै चुनौतीपूर्ण छ । बेस क्याम्पसम्म दुखेका गोडालाई घिसार्दै हिँडेका हामीलाई एउटै कुराको डर थियो, लेक । गोडाको चोटले निशा पछाडि छुटिसकेकी थिइन् । शरीरले बिरामीजस्तो भए पनि मन भने फुरुङ्गै थियो । बेस क्याम्प पुगेपछि तिलिचो पुग्नैपर्छ भन्ने दबाबले होला हामीले आफ्नो शरीर सन्चो बनाउने हर प्रयास गर्‍यौँ ।
साथीहरु बिरामी भएको देख्दा बेस क्याम्पबाटै फर्किनु पर्छ कि ? भन्ने प्रश्नले नसताएको होइन । तर समूहले एकअर्कालाई हौसला दिन, लेक नलाग्ने औषधि खुवाउन हर प्रयास गर्‍यो । टोलीको सबैभन्दा जवान अनि उमेर ५५ कटेका अंकलले हाम्रो स्वास्थ्यको खुबै वास्ता गर्नुभयो । उहाँको सल्लाह, हौसला अनि तिलिचो पुग्ने आत्मविश्वासले हामीले बेस क्याम्पमा रात बितायौं ।
बेस क्याम्पमा भेटिएका सबै यात्रीको एउटै उद्देश्य थियो, बिहानको ४ बजे तिलिचोको उकालो चढ्ने । हामी पनि सहमत भयौं । शरीरले सहमति दिइसकेको छैन । लेकको लक्षण देखिएको साथीहरुले लसुनको सुप पिएर रात काट्यौं । मध्य रातमा सिर्जनालाई सास फेर्न गाह्रो भयो । उनको स्वाँस फेराइ निस्सासिएको झैं सुनिन्थ्यो । सिर्जनाले स्वाँ-स्वाँ गर्न थालेपछि सन्ध्या दिदी, निशा र म आत्तियौं । सिर्जनाले आफ्नो समस्या लुकाउन खोजी । कष्टकर रात स्वाससँग पैठेजोरी खेल्दैमा बित्यो । कठ्यांग्रिने जाडो । ३:४५ मा कसैले ढोका ढकढक्यायो । निशाले जुरुक्क उठेर भनिन्, 'ह्याप्पी दसैं' । हामीले दसैंको शुभकामना दिँदै बेस क्याम्पको कष्टकर रात बिर्स्यौं ।
टीकाकै दिन अँध्यारोमा हतार-हतार गर्दै समूहसँगै हामीले तिलिचोको उकालो चढ्यौं । बेस क्याम्पमा बिजुली थिएन । मोबाइल अफ। हाम्रो समूहले लाइट बोकेको थिएन । अरुले बोकेको लाइटले झ्याप्प देखाउने बाटोमा छिटोछिटो कदम बढाउनुको विकल्प थिएन । बेस क्याम्पदेखि तिलिचोको ठाडो उकालो । त्यसमाथि पंक्तिबद्ध भएर लाइटले देखाउने बाटोमा हिँडिरहेको दृश्य क्यानभास सम्झँदै कति सुन्दर देखिन्थ्यो । ठाडो उकालोमा सास रोकिएलाझैं हुन्थ्यो । गोडा अचल बन्थ्यो । २ दिनको लगातार हिँडाइ सम्झन्थ्यौं । चिसो सिरेटोले बाक्लो ज्याकेटबाट मुटुमै छुएजस्तो हुन्थ्यो । निस्पट्ट अँध्यारोमै हिँड्दै गर्दा सिर्जनाले झ्याम्म अंगालो मारी, आँखाभरि आँसु बोकेर । एकअर्काको कष्टलाई साथ हौसला दिँदै कदम चलाउन छोडेनौं । विस्तारै अँध्यारो हट्दै गयो । नदीको दृश्य धूमिल हुँदै गयो । ठाडो उकालोले सासको गति छोटो बनाउँथ्यो । आफ्नो सासको गति सुन्दै लसुन मुखमा हालेर ठाडो उकालो चढ्न थाल्यौं । ४:५५ मा बेसक्याम्पबाट माथि उक्लिएका हामी १० बजेतिर तिलिचो पुग्यौं ।
बेस क्याम्पको कष्टकर रात, तीनदिने हिँडाइको थकान निलो तिलिचो तालले एकैछिनमा बिर्साइदियो । मनमोहक र सौम्य तिलिचोसँग हामीले सेल्फी लियौं । शान्त तिलिचोलाई पृष्ठभूमिमा पार्दै हामी तस्बिर खिच्न हानथाप गर्‍यौँ । कुनै ठूलै सफलता प्राप्त गरेझैं हामीले खुसीले चिच्यायौँ । तिलिचोको अद्भूत दृश्यले मन्त्रमुग्ध पार्ने नै भयो । तिलिचोको सौन्दर्य नियाल्ने हाम्रो रहर पूरा भएकै थिएन, तर सबैका आ-आफ्ना काम र प्रतिकूल मौसमका कारण यात्रा छोट्याउनु थियो । तिलिचोले दिएको माया बोकेर पहिलेकै डोब पछ्याउँदै हामी फर्कियौं ।
प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ १३:२९